‘वेस्टर्न कल्चर’ बुझेर नेपाल फर्किएका दिदीबहिनीको नयाँ सोच ‘विहे नेपाल’
4:56 pm, बुधबार, फाल्गुन ११, २०७८
काठमाडौं । नेपाली समाजमा विवाहलाई जीवनमा एकपटक गर्नैपर्ने संस्कारको रूपमा लिने गरिएको छ । मान्छे जन्मेसँगै निश्चित उमेर पुगेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । कानुनले पनि २० वर्ष पूरा गरेपछि विवाह गर्न योग्य ठानेको छ ।
केहीले उमेर नपुग्दै विहे गर्ने गरेका छन् भने केहीले उमेर ढल्किँदासम्म विहे नगरी बसेको देखिन्छ । कोही पढाइ, करियर, रोजगारी लगायतका जीवनको लक्ष्य भेटेपछि मात्र विहे गर्छन् भने कोही विहे गरेर करियर सुरू गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि एरेञ्ज म्यारिज (मागी विवाह) गर्ने चलन धेरै छ । यद्यपि, पछिल्लो समय लभ म्यारिज, कोर्ट म्यारिज हुने क्रम पनि बढ्दो छ । लभ, कोर्ट म्यारिज गर्नेहरू आफैंले जोडी खोजेका हुन्छन् भने एरेञ्ज म्यारिज गर्नेहरू आफन्त, नातेदार, छरछिमेकको माध्यमबाट जोडी खोज्ने गर्छन् ।
यसरी कसैको माध्यमबाट जोडी खोज्दा प्रायःजसो एक/दुई पटक भेटेकै भरमा विहेको टुंगो लाग्ने गरेको देखिन्छ भने केहीले आमाबुबाले भनेकै भरमा विहे गर्ने गरेका छन् । एकअर्काको आनिबानी नबुझी हतारमै विहे हुने गरेको देखिन्छ । एक अर्कालाई राम्रोसँग नबुझ्दा विवाहपछि सम्बन्ध टुटेको पनि देखिन्छ ।
केहीले आफूले भनेजस्तो केटाकेटी नपाउँदा विहे गर्न सकेका छैनन् भने केहीले अरूले खोजीदिएको केटाकेटीसँग विहे गरेर पछि सम्बन्ध तोड्ने गरेका छन् । आफूले विहे गर्ने केटाकेटीको बानीव्यवहार, विचार, रोजाई, चाहना, इच्छा नबुझ्दा सम्बन्धमा दरार आउँछ भने कहिलेकाहीँ टुट्नसम्म सक्छ ।
एक दिन भेटेको भरमा विवाह गर्नुभन्दा एक अर्कासँग कुरा गरेर बानी, व्यवहार बुझेर सोच विचार मिल्नेसँग विवाह गर्नपाउनु भाग्यकै कुरा हो । यो अवसर कमैलाई मात्र मिलेको हुन्छ । धेरैलाई आफूलाई बुझ्ने र आफ्नो इच्छा अनुसारको व्यक्तिसँग विहे गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, सहजै भने जस्तो जोडी भेटिँदैन ।
यस्तै, माथि भनिएजस्ता विभिन्न कुरालाई मध्येनजर गर्दै आधुनिक जमानाका युवायुवतीको चाहना र रोजाइ अनुसारका जीवन साथी जुराइदिन प्रविधिको प्रयोगमार्फत दुई दिदीबहिनी सहयोगी बनेका छन् । उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएको ‘विहे नेपाल’ नामक एपले केटाकेटीले आफूले खोजे अनुसारको जीवसाथी भेट्टाइदिने गर्छ ।
कलेजको प्रोजेक्ट वर्क गर्दा जन्मियो ‘विहे नेपाल’
श्रद्धा कटुवाल (दिदी) र श्रेया कटुवाल (वहिनी) दिदीबहिनी हुन् । अमेरिकामै हुर्केका उनीहरू सन् २००७ मा नेपाल आएका थिए । यूनाइटेड स्कुलमा आफ्नो पढाई पूरा गरेका थिए । श्रद्धाले वि.सं २०६३ मा एसएलसी पास गरेर एम्बीसन एकेडेमीकमा विज्ञान विषय लिएर पढन थालेकी थिइन । प्लस टु पछि सिभिल इन्जिनीयर पढेकी उनले न्यूजिल्याण्डमा स्कलरसिपमा सन् २०१९ मा मास्टर्स गरेकी थिइन् ।
बहिनी श्रेयाले वि.सं २०६९ मा एसएलसी पूरा गरेकी थिइन् । उनले पनि दिदीले जस्तै विज्ञान विषयमा १२ पूरा गरी सफ्टवेर इन्जिनीयरीङको पढाइ गर्न थालेकी थिइन् । जस क्रममा कलेज प्रोजेक्टको रूपमा सफ्टवेर निर्माणको काम आइपरेको थियो । सो क्रममा उनको ग्रुपमा ३ जना क्लासमेट पनि सँगै थिए । प्रोजेक्टकै सिलसिलामा आमा उर्मीला खड्काले विवाह गर्न जोडी मिलाउनका लागि एउटा वेबसाइट बनाउने सल्लाहा दिनुभएको थियो ।
जस क्रममा उनले आफै ‘मेरो जोडी’ नामक वेबसाइट खोलीन, प्रोजेक्ट पूरा भयो । ब्याचलर सकियो । संगीतमा निकै रुची भएका उनीहरू दिदी श्रद्धा न्यूजल्याण्डबाट सन् २०१० मा नेपाल फर्केपछि आफैं केही गर्ने सोचमा लागे । श्रद्धाले रावा इन्जिनीयरिङ एण्ड सफ्टवेयर कम्पनी चलाउन थालिन् । २/४ वटा सफ्टवेयर र वेबसाइट निर्माण गरिसकेका उनीहरूले मानिसहरूको विवाहको समस्याहरू धेरै देखे । कोहीले केटी नपाउने गुनासो गरे त कतै केटा नै भनेजस्तो नपाउने गरेको पाइयो ।
सबै विवाह गर्न चाहाने जोडीलाई एकै ठाउँ ल्याएर मन मिल्दो मान्छे भेटाउने उद्देश्यसहित ‘विहे नेपाल’ एप डेभलप भयो । सफ्टवेरमा अध्ययन पूरा गरेकी श्रेयाले एप निर्माण गरिन ।
‘कपल फोटो कम्पिटिसन’ले बढायो प्रयोगकर्ता
सुरूमा २/३ पटक परीक्षणका रूपमा एप निर्माण गरेका उनीहरूले सुरूमा एपको डाउनलोड १५०० पुग्दा केही आशा जाग्यो । तर १५०० जति प्रयोगकर्तामा पुरुषभने ८/९ सयका हाराहारीमा हुने गर्थे भने महिलाको संख्या निकै कम नै हुने गरेको थियो । यसै क्रममा उनीहरूले २०२१ मा कपल फोटो कम्पिटिसन समेत गरेका थिए । फेसबुकबाट गरिएको यो प्रतिस्पर्धामा १४० जोडी सहभागी भएका थिए ।
श्रद्धा भन्छिन् ‘हामीले आफ्नै परिवारमा मामुले अरु १/२ जनाको जोडी मिलाएको देखेका छौं, एक पटक भेट्यो, अर्को हप्ता बिहे फिक्स हुन्छ, विदेशमा हुनेहरू झन आएको १ महिनामा केटी खोज्ने, घर–घर धाउँदै केटी खोज्ने पुरानै नियम छ, समय अभावले हतारमा जोडेको सम्बन्ध टुट्ने पनि सम्भावना हुन्छ ।’
उनले यस्ता समस्याहरूको समाधानका रूपमा ‘विहे नेपाल’ एप डेभलप भएको बताइन । उनले एस एपमा विवाह अथवा आफ्नो जीवन साथीको खोजीमा आउने मान्छेहरू देशविदेश जुनसुकै कुनाबाट पनि जोडिन सक्ने बताइन् । एकै ठाउँमा धेरै मान्छेहरू भेट हुँदा लामो समय कुरा गर्न पाउने, एक अर्कालाई बुझ्ने समय हुने उनी बताउँछिन् ।
श्रेया थप्छिन् ‘तपाइले एप डाउलोड गरेर सिधैं विहेको लागि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सुरूमा साथी मात्र बन्न चाहानुहुन्छ भने साथी बन्ने अप्सन पनि छ, डेटिङनै गर्नका लागि एपमा आउनु हुन्छ भने डेटिङ अप्सन छ र विवाहाकै लागी कमिटेड हुनुहुन्छ भने सिधै विहेको लागि भनेर आफ्नो जोडी पनि खोज्न सक्नुहुन्छ ।’
उनका अनुसार एपमा १८ वर्ष माथिका युवायुवतीहरू जोडिन सक्नेछन् । व्यस्त जीवनमा आफ्नो जोडी नभेटिएको अवस्थामा आफूसँग मिल्दो जुल्दो जोडी भेट्न सकिन्छ ।
उनीहरूले चाँडै ‘स्पिड डेटिङ इभेन्ट’ समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले ‘विहे नेपाल’ एपलाई आधिकारी रूपमा फागुन १२ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कसरी जोडिने विहे नेपालमा ?
सुरूमा मोबाइलको एप स्टोरमा गएर विहे नेपाल टाइप गरी डाउनलोड गर्नुहोस् । लग इन र साइन अपको अप्सन आउनेछ । तपाईंंले फेसबुक अथवा गुगल आइडीबाट सजिलै एप लगइन गर्न सक्नुहुनेछ । अब त्यसमा तपाईंंको नाम, थर र फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि जन्म मिति र आफ्नो जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोस । जसमा तपाईंंले महिना, पुरुष, गे, लेस्वियन, ट्रान्स जेन्डर अप्सन पाउनुहुने छ । त्यसको तल तपाईंं कस्ता व्यक्तिमा इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर छनोट गर्ने अप्सन हुने छ । जसमा तपाइले आफू इच्छुक जेन्डर सेलेक्ट गरी एपको टर्मस् र कन्डिसनमा मार्क गरी डन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले तपाईंको गोपनियता सुरक्षित राख्ने छ । कुनै फेक आइडी भए त्यसलाई अघि बढ्न दिने छैन ।
त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइलमा क्यामेरा अथवा ग्यालरीमा रहेको फोटो अपलोड गरी प्रोफाइल राख्नुहोस । त्यसपछि एड फोटोको अप्सन आउने छ । जसमा तपाईंले आफ्ना अन्य फोहोहरू समेत एड गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसपछि तपाईं पुरुष भए महिलाहरूको आइडी उनीहरूको तस्वीर र उमेर सहित अगाडि स्क्रिनमा आउनेछ । महिला भए पुरुष मित्रहरूको प्रोफाइल तपाईंले पाउनुहुनेछ । त्यस प्रोफाइलहरूबाट आफू इच्छुक भएका व्यक्तिहरूलाई रिक्वेष्ट पठाउन सक्नुहुनेछ । रिक्वेष्ट पठाएको व्यक्तिले एक्सेप्ट गरेको खण्डमा तपाईंहरू सजिलै आफ्नो कुराकानी अघि बढाइ एक अर्काको विषयमा जान्न सक्नुहुन्छ ।
एपमा तपाईंले भेरिफाइड युजर्सहरू छनोट गर्न सक्नुहुनेछ । कुन देशमा भएको मान्छेसँग तपाईं कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, कति पढेको छान्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि अप्सनमा गएर छनोट गर्न सक्नुहुनेछ । जसबाट तपाईंले सजिलै आफ्नो रोजाइ अनुसारको मान्छे फिल्टर गरी छान्न सक्नुहुनेछ । उक्त अप्सनलाई रिसेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।
एप चलाउँदै गएपछि तपाईंकोमा आएका रिक्वेष्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । उक्त रिक्वेष्ट मध्ये तपाईं आफू इन्छुक व्यक्तिलाई एक्सेप्ट गरी वार्तालाप अघि बढाउन सक्नुहुनेछ । एपमा आफ्नो म्याचहरूलाई माइ म्याच अथवा सेभमा गएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ ।
आइडीमा तपाईंले आफ्नो प्रोफेसनका बारेमा, आफ्नो जानकारीहरू रिलिजन, हबी, हाइट, कोसँग बस्नुहुन्छ, विहे भएको नभएको, डिभोर्स, विधवा, विधुर रहेको बारेमा पनि जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाईं यस एपमा आफूलाई राख्न चाहानुहुन्न र तपाईंले आफ्नो जोडी पाइसक्नु भएको छ भने तपाइले सजिलै आफ्नो एकाउन्टमा गएर एकाउन्ट डिलिट गरी हटाउन पनि सक्नुहुनेछ । चाँडै एपले ब्लक गर्न मिल्ने अप्सन पनि ल्याउँदै गरेको श्रेयाले बताइन् । यसरी व्यस्त जीवनमा आफ्नो जोडी खोज्न समस्या भोगेका हालका जेनेरेशनका लागि यस एप सहयोगी बन्ने श्रद्धा बताउँछिन् । हालका लागि यो एप प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जनाइएको छ ।
इलाममा तारा एयरको व्यावसायिक उडान सुरू, भाडा कति ?
५ लघुवित्तको लाभांश घोषणा हुन बाँकी, यी ४ वटाको सेयर किन्दा अझै पाइन्छ लांभाश, कुनको कति ?
हाम्रै लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउने सरकारको निर्माण
काठमाडौंमा रेल चलाउने बालेनको पनि रहर
चीनले बनाउने जिम्मा लिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र
३ विद्यार्थीले जन्माएको ‘सम्सरा क्रिएसन’, जसले पुराना कपडाबाट बनाउँछ नयाँ झोला र कपडा
बन्यो ग्वार्को फ्लाईओभरको डिजाइन, काम सुरु गर्ने तयारी
विशेष सम्पादकीयः अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समाजवाद र हामी
मौद्रीक नीति २०७९: बैंकको संख्या घटाउँदै सन्तुलित वृद्धि
© , Automotives Pvt. Ltd. All rights reserved.